Chin Culture Videos | Network for Chin Community Development
Zomi Khuado Pawi ( Harvest festival)
Zogam it na la.
Do na lingling zo ngei na la.
အိန္ဒယနိုင်ငံ ဒေလီးမြို.တွင် ချင်းဒုက္ခသည်များ၏ ဘ၀
Trump နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်း ပြောကြားမှု ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ Pelosi တိုက်တွန်း January 16, 2019
သမ္မတ Donald Trump ရဲ့နိုင်ငံတော် အခြေပြမိန့်ခွန်းကို ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ ဒါမှမဟုတ် စာနဲ့ဘဲ ရေးတင်ပြဖို့ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ နန်စီပလိုစီ က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ […]
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆက်ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ ပြည်ပ ကချင်ခေါင်းဆောင်တွေ တောင်းဆို January 16, 2019
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကစပြီး ၇ နှစ်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို NLD အစိုးရအနေနဲ့ ဆက်ပြီး ရပ်ဆိုင်းထားသင့်တယ်လို့ ပြည်ပရောက် ကချင်ခေါင်းဆောင်တချို့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ […]
AA ရက္ခိုင့်တပ်မတော်တောင်းဆိုထားတဲ့ Confederate မူအပေါ်သုံးသပ်ချက် January 16, 2019
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ အညီ အာဏာခွဲဝေမှု မြင့်မားတဲ့ Confederate ကွန်ဖက်ဒရိတ် ဆိုတဲ့မူဟာ လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်တို့ သွားနေတဲ့ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မူနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားချက်တွေ ရှိသလဲ။ […]
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် အပေါ် အယုံအကြည်မရှိအဆို လွှတ်တော်မှာ ရှုံးနိမ့် January 16, 2019
အယုံအကြည်မရှိ အဆိုမဲခွဲရာမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် May ဟာ လွှတ်တော်ကနေ တဆင့် Brexit သဘောတူညီချက် အရေးကို ပြန်ပြီး အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ […]